SBO – Muddee 16, 2016
Posted: Muddee/December 17, 2016 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (1)
Fincilli diddaa gabrummaa kun maaliif yaroo mara baratoota qofaan itti fufaa?
Bartootuma oromoo qofatu bishaaniif midhaan oromia nyaatee bulaayyuu???
Daud Ibsaa fincilaa fii hiriira nagaa ummanni oromoo godhaa jiru dura nutu jira jedhe. Egaa dhumaatii Bishooftuu keessssaas itti gaafatama fudhachuu issaati.
Waraana WBO ijajuu irraanfatee qaanii tokko malee daa’immaan waggaa 5tin harka keessan duwwaa taankii wayyaanee dura dhaabadhaati “ABO nu haabulchuu jedhaa” jedhee ajaja dabarsaa jira.
Ijoolleen oromoo rasaasa seetee? Jarana ofii sodaattanii ijolleen hinsodaatu jettanii isin wayyaanee caala dhaloota oromo lafa irraa ballessaa jirtu! Oromo millionaan lakkaawaman hidhaman yoo ajjeesuu baatan hunda isaanii KOLAASANIITU gadi dhiisan!!!!!
Kana jechaan dhalooni oromoo suuta suuta laffaa irraa duguugamaa deema jechaadha! Nama angoof waan hunda godhu malee dhimma kana beekee ijolleetti himu hinjiru. Warrii biyya alaa taa’ee ofii hamburger ofii cuffachaa “fincila ittii fuffaa” jedhee harka ijolleettin ibidda qabachuu hisodaannee kun ofiifis gaaf tokkollee mee fincilli kun maal akka ta’e ofumaa haa argan. Ijoollee oromoo tokko kolaasuu mannaa Daud Ibsaa kolaassuu wayyaa!!
Ijoolleee oromo gorsa koo kana qalbeeffadhaa!
1) Oromoon hundi (qoteebulaa, hojjettoota mootummaa, barsiiftota dabalatee) yoo fincile malee HINFICILINAA. Biyaa ambaa kana namni dhiiga fi lafee keessan irra utaalee siree hangoorrati of darbachuuf qophayee hedduutu jira!
2) Yoo finciltan meeshaa waraanaa hidhattan malee manaa hibayinaa. Ajeesuufis du’uufis of qophessaa. Dura ajeeftan malee hindu’inaa!